Tontolon'ny asa :: Misy ny fanofanana ho an’ireo mpiasa sy olona nahavita fianarana • AoRaha
Tontolon’ny asa Misy ny fanofanana ho an’ireo mpiasa sy olona nahavita fianarana
Tohana. Ho afaka hisitraka fanofanana ireo olona efa miasa any anivon’ny orinasa na ireo any amin’ny sampan- draharaham-panjakana, ireo mpianatra vao nahavita fianarana ary ireo olona tsy an’asa, nefa manana tanjona ny hivoatra kokoa amin’ny sehatra iasany. Amin’ny alalan’ny tahiry famatsiam-bola malagasy ho fampandrosoana ny mpiasa na ny FMFP no hanatanterahana izany. “ Natao hanamafisana ny traikefan’ireo mpiasa ity fiofanana ity mba hahafahana manaraka ny fiovana misy eo anivon’ ny tontolon’ny asa”, hoy Ramamonjiarisoa Jean Luc, tale jeneralin’ny sehatra ho fisian’ity FMFP ity , teny Anosy, omaly.
Seha-pihariana dimy no voakasiky ny fanofanana dia ny fizahantany sy ny fitantanana ny trano fandraisam-bahiny, ny resaka manodidina ny akanjo, ny fanaovana trano sy ny taozava- baventy,teknolojia sy ny fifandraisana, ny fitrandrahana. Voalaza fa afaka mivondrona ao anatin’ny seha-pihariana iray ireo olona miasa amin’ ny sehatra tsy misy rafitra toy ireny miasa amin’ny tontolo ambanivohitra sy ny maro hafa ireny . “ Azon’izy ireo atao ny manao fangatahana hahafahan’izy ireo misitraka ity fanofanana ity amin’izay sehatra tian’izy ireo hanampiana azy “, araka ny fanampim-panazavana. Manodidina ny arivo sy roa alina tapitrisa ny vola natokan’ny Antokon-draha- raha frantsay mahakasika ny fampandrosoana na ny AFD ho an’io tahirim-bola io araka ny fantatra.
“ Tombony betsaka ho an’ny mpiasa malagasy ary hahitana vokatsoa ho an’ny toeram-piasana ny fisian’ izao tahirim-bola izao . Maimaim-poana rahateo ny fanofanana ho an’ireo miasa any amin’ny orinasa satria ny mpampiasa azy no mandoa latsakemboka ho fandraisana anjara amin’izany”, hoy Andriamamonjiarison Noro, filohan’ny fikambanan’ny orinasa eto Madagasikara. Araka ny fantatra dia efa nisy filazana nataon’ireo tompon’andraikitra momba ny fisian’ity fanofanana ity . Tsy voafetra ny isan’ny olona afaka handray anjara amin’ ny fiofanana satria hitohy mandritra ny fotoana tsy voafetra izany, hoy indray ny tale jeneralin’ny FMFP.
Vokatry ny andro ratsy Namono olona sy nandravarava ny rivo-doza « Belna »
Toetr’andro Vinavinaina hiditra an-tanety anio ilay rivo-doza « Belna »
Fiparitahan’ny kitrotro :: Nihena ampahatelony ireo zaza voatery nampidirina hopitaly
Toetr’andro :: Hihena ny rotsak’orana eto afovoan-tany